induction အပူ၏လျှပ်စစ်သံလိုက် | induction အပူစက်ထုတ်လုပ်သူ | induction အပူဖြေရှင်းချက်
သော induction အပူ၏ electrimagnetic
သံလိုက် induction အပူပေးစက်ထုတ်လုပ်သူ
သံလိုက်သော induction အပူပေးစက် သတ္တုများသို့မဟုတ်အခြားလျှပ်ကူးပစ္စည်းများကိုအရည်ပျော်စေရန်၊ ကျက်စားရန်၊ ဖောက်ရန်၊ ချည်နှောင်ရန်၊ အပူပေးရန်၊ ပိုမိုခိုင်မာစေရန်သို့မဟုတ်ပျော့ပြောင်းစေရန်အသုံးပြုသောလုပ်ငန်းစဉ်ပစ္စည်းကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များစွာအတွက် Magnetic induction heat equipment သည်အမြန်နှုန်း၊ ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုတို့ကိုပေါင်းစပ်ပေးသည် သံလိုက်သော induction အပူ အဆိုပါ 1920s ကတည်းကနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းမှလျှောက်ထားခဲ့ကြသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းကအလျင်အမြန်ဖွံ့ဖြိုးနည်းပညာသတ္တုအင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းများကိုခိုင်မာစေမယ့်အစာရှောင်ခြင်း, ယုံကြည်စိတ်ချရသောလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အရေးပေါ်စစ်အတွင်းလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်။ မကြာသေးမီကတိုးတက်လာသောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအပေါ်ပိန်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းစနစ်များနှင့်အလေးပေးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်တိကျစွာထိန်းချုပ်ထားအပေါင်းတို့, အစိုင်အခဲပြည်နယ်သော induction လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထောက်ပံ့မှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ induction နည်းပညာတစ်ခု rediscovery မှဦးဆောင်ခဲ့ကြသည်။
သံလိုက်သော induction အပူပေးစက် induction heat radio frequency (RF) စွမ်းအင်၏ထူးခြားသောလက္ခဏာများကိုမှီခိုသည်။ အနီအောက်ရောင်ခြည်နှင့်မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်စွမ်းအင်အောက်ရှိ electromagnetic spectrum ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အပူကိုလျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများမှတဆင့်ထုတ်လွှင့်သောကြောင့်၎င်းအစိတ်အပိုင်းသည်မည်သည့်မီးလျှံနှင့်မျှတိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခြင်းမရှိသောကြောင့်၊ စနစ်တကျ set up သောအခါ, ဖြစ်စဉ်ကိုအလွန်ပြန်လုပ်နှင့်ထိန်းချုပ်ဖြစ်လာသည်။
1.IGBT module နှင့် soft switchiching inverting နည်းပညာများသည်ထုတ်လုပ်မှုတွင်ရှိသည် မီးစက်, ပိုမိုမြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရလုပ်နိုင်ပါတယ်။
2. အသေးစားနှင့်သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီး SCR ထိန်းချုပ်ထားသောစက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် 1/10 အလုပ်လုပ်ရန်နေရာလိုအပ်သည်။
၄။ မီးစက်သည် 4KHZ မှ 1KHZ အထိကြီးမားသောကြိမ်နှုန်းအတိုင်းလိုက်ဖက်ညီအောင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ တပ်ဆင်ခြင်းကိုအလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်စွဲအရသိရသည်။
၅၀၀% တာဝန်သံသရာ၊ အများဆုံးစွမ်းအားဖြင့်စဉ်ဆက်မပြတ်အလုပ်လုပ်နိုင်သောစွမ်းရည်။
6. စဉ်ဆက်မပြတ်ပါဝါသို့မဟုတ်စဉ်ဆက်မပြတ်ဗို့အားထိန်းချုပ် mode ကို။
၇။ output output၊ ကြိမ်နှုန်းနှင့် output voltage ပြသခြင်း။
DW-လှိုင်းနှုန်းသည် UHF-6KW-II ကို
DW-လှိုင်းနှုန်းသည် UHF-6KW-III ကို
DW-လှိုင်းနှုန်းသည် UHF-6, 0KW
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား နည်းပညာများ Tags: သော induction အပူ၏ electrimagnetic, သံလိုက် brazing, သံလိုက်အပူ, သံလိုက်အပူကုသမှု, သံလိုက်သော induction brazing, သံလိုက်သော induction အပူပေးစက်, သံလိုက်သော induction အပူ, သံလိုက်သော induction အပူစက်, RF သံလိုက်အပူ
ဘယ်လို induction အပူအလုပ်ဖြစ်တယ်?
induction အပူ စက္ကန့်အတွင်းအနီသတ္တုဘားချယ်ရီတစ်တိကျစွာသတ်မှတ်အပိုင်းကိုဖွင့်နိုင်မယ့်မီးလျှံ-အခမဲ့, No-အဆက်အသွယ်အပူနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းကိုမည်သို့ဖြစ်နိုင်ပါသနည်း
လက်ရှိအနေနဲ့ induction ကွိုင်မှတဆင့်စီးဆင်းပြောင်းနေတဲ့သံလိုက်စက်ကွင်းကိုထုတ်ပေးပါတယ်။ လယ်ပြင်၌ရှိသောအစွမ်းသတ္တိဟာကွိုင်မှတဆင့်လက်ရှိသွားတာ၏ခွန်အားနှင့် ပတ်သက်. ကွဲပြားခြားနားသည်။ အဆိုပါလယ်ကွိုင်များကပူးတွဲထိုဒေသတွင်အာရုံစိုက်လျက်ရှိ၏ ယင်း၏ပြင်းအားလက်ရှိ၏ခွန်အားနှင့်ကွိုင်အတွက်အလှည့်များ၏အရေအတွက်အပေါ်မူတည်နေစဉ်။ (ပုံ။ 1) Eddy ရေစီးကြောင်းဥပမာ-ထားရှိသည့် induction ကွိုင်အတွင်း၌အဘို့, မည်သည့်လျှပ်ကူးအရာဝတ္ထု-သတ္တု bar မှာသွေးဆောင်နေကြသည်။ ခုခံ၏ဖြစ်ရပ်ဆန်းသည့် Eddy ရေစီးကြောင်းစီးဆင်းနေကြသည်ရှိရာဧရိယာထဲမှာအပူထုတ်ပေးပါတယ်။ ယင်းသံလိုက်စက်ကွင်းများ၏အစွမ်းသတ္တိကိုတိုးမြှင့်အပူအကျိုးသက်ရောက်မှုတိုးပွားစေပါသည်။ သို့သော်စုစုပေါင်းအပူအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလည်းအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုနှင့်ကွိုင်ကြားအကွာအဝေး၏သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများကလွှမ်းမိုးနေသည်။ (ပုံ။ 2) က Eddy ရေစီးကြောင်းဟာကွိုင်ကထုတ်လုပ်မူလလယ်ကိုဆန့်ကျင်ကြောင်းမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်သံလိုက်စက်ကွင်းဖန်တီးပါ။ ဒါဟာအတိုက်အခံချက်ချင်းကွိုင်များကပူးတွဲအရာဝတ္ထု၏ဗဟိုမှထိုးဖောက်ရာမှမူရင်းလယ်ကိုကာကွယ်ပေးသည်။ အဆိုပါ Eddy ရေစီးကြောင်းအပူဖြစ်ခြင်းအရာဝတ္ထု၏မျက်နှာပြင်မှအနီးကပ်အများဆုံးတက်ကြွနေကြသည်, ဒါပေမယ့်ဗဟိုဦးတည်ခွန်အား၌သိသိသာသာအားပျော့။ (ပုံ။ 3) လက်ရှိသိပ်သည်းဆ% ကိုထိုးဖောက်မှုအတိမ်အနက်တစ်ခုဖြစ်သည် 37 မှပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်ရှိရာနက်ရှိုင်းဖို့အပူအရာဝတ္ထုရဲ့မျက်နှာပြင်ကနေအကွာအဝေး။ ဒီအတိမ်အနက်ကိုအကြိမ်ရေအတွက်လျော့ကျဖို့ဆက်စပ်မှုအတွက်တိုးပွားစေပါသည်။ ဒါဟာတပ်မက်လိုချင်သောအထိုးဖောက်မှုအတိမ်အနက်ကိုအောင်မြင်ရန်နိုင်ရန်အတွက်မှန်ကန်သောအကြိမ်ရေကိုရွေးဖို့ထို့ကြောင့်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ Tags: သော induction အပူ၏ electrimagnetic, ဘယ်လိုသော induction အပူအလုပ်, သော induction အပူ၏နိယာမ, သော induction အပူ၏သီအိုရီ